Isku aadka tartanka Europe League oo La sameeyey.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Isku aadka tartanka Europe League oo La sameeyey.
Isku aadka tartanka Europe league ayaa si rasmi ah loo soo saaray waxaana isku aadku uu dhacay mid aad u adag waxaana kasoo baxeen ciyaaro aad u adag oo ay ka mid yihiin manchester united iyo milan sidoo kale Roma iyo shacktor donetsk.
Halkaan kaga bogo sida uu u dhacay isku aadku
Lugta koobaad ayaa la ciyaari doona 11 bisha maarso iyadoo lugta labaadna la dheeli doono 18 isla bisha maarso.
Previous articleArsenal oo ka fiirsaneysa inay u ogolaato Hector Bellerin inuu Kooxda Joogo xagaaga dambe.
Next articleMacalinka Chelsea Thomas Tuchel oo ka hadlay Kulanka Manchester United